Tag: Cadde | Sagal Radio Services
Faahfaahino ka soo baxayaa duqeyn ay ciidamada Kenya ka geysteen deegaanka Ceel Cadde
Sagal Radio Services • News Report • June 17, 2018
Waxaa soo baxaya faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan duqeyn ay ciidamada Keka geysteen deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo.
Duulimaadyadii rayidka ee garoonka diyaaradaha Muqdisho oo saaka la joojiyay
Sagal Radio Services • News Report • September 13, 2016
Duulimaayadii Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee isugu jira midka Caalamiga iyo gudaha ayaa saaka oo Talaado ah la joojiyay, sababo ku aadan Shir madaxeedka Urur Goboleedka IGAD.
Cadde Muuse “Puntland hadaan la daaficin waa baaba’aysaa”
Madaxweynihii hore ee Puntland Jen. Cadde Muuse Xirsi oo ku sugan dalka isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa ka hadlay duulaanka Al-Shabaab ku qaaday Puntland, markii dagaalyahano boqolaal gaaraya ay maalmo ka hor doonyo uga dageen xeebaha Nugaal iyo Mudug.
Ammaanka Garoonka diyaaradaha oo la adkeeyay iyo dad loo qabtay Qarixii Diyaarada Daallo
Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii 2-dii bishan qarax ka dhex dhacay gudaha Diyaaradda Daallo Airlines, taasoo keentay inay si deg deg deg ah ugu soo laabato garoonka.
Xaalada deegaanka Ceel-Cadde oo saaka degan iyo diyaaradaha Kenya oo baadigoobayo askar la la’yahay
Xaalada deegaanka Ceel-Cadde ee Gobolka Gedo ayaa saaka ah mid degan, kadib markii shalay Al-Shabaab weerar culus ku qaaday saldhig Ciidamada AMISOM ee Kenya ku qaaday halkaas.
INDHA-CADDE: Abuu-Cubeyda wuxuu ka mid yahay raggii aasaasay Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • September 7, 2014
Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha-cadde) oo ka mid ahaa madaxdii maxkamadihii Islaamka ayaa sheegay in hoggaamiyaha cusub ee Xarakada Al-shabaab, Axmed Cumar Abuu-Cubeyda uu ka mid ahaa raggii aasaasay kooxda.
Xaalada Caafilaad ee Wariye Tima Cadde ayaa ah saakay mid wanaagsan iyada oo ay sheegayaa dhaqaatiirta in ay soo hagaayeyso xaaladiisa.
Sagal Radio Services • News Report • October 23, 2013
Waxa sidii ay shalay aheed ka soo hagaageyso xaalada caafimaad ee Wariye Maxamed Maxamuud Tima Cadde oo shakay kooxo hubeysan ay ku dhaawaceen xaafadiisa oo ku taalo Dagmada WadaJir ee Gobalka Banaadir.